Chiwanikwa asiri beadlock
Chiwanikwa zvechokwadi beadlock
Chiwanikwa muwedzero beadlock
Steel asiri beadlock
Steel kutevedzera beadlock
Steel zvechokwadi beadlock
Steel muwedzero beadlock
RMC Industrial CORPORATION ari nyanzvi huru dzinotambudza mugadziri pakubhadhara ose simbi mumakumbo uye aruminiyamu chiwanikwa engoro, kusanganisa kukura uye kugadzirwa pamwe chete. Our chikuru zvigadzirwa zvinosanganisira simbi asiri beadlock mavhiri, simbi beadlock mavhiri uye nevasiri beadlock aruminiyamu chiwanikwa mavhiri uye beadlock aruminiyamu chiwanikwa mavhiri uye matai, uyewo tinogona kupa mizhinji uye nenhumbi kuti motokari zvakasiyana.
boka redu hwagadzwa muna 2008, boka asati akasimbisa isu vaitova makore akawanda nhoroondo mumakumbo uye matai indasitiri. Zvayaiva pana Ningbo City pedyo Shanghai, tinonakidzwa yakakunakira mvura, nyika uye mhepo chokufambisa.
vashandi vedu boka zvose chaizvo muduku uye nokuedza nomudonzvo yedu yose, RMC vanhu vachiva vakaedza kuvandudza chigadzirwa quality, uye akaramba achiedza kuvandudza kambani vedu Kugadzirisa musimboti uye kwesayenzi pfungwa. Kugadzirwa yedu pagore kugona ndiyo mamiriyoni 2 nemavhiri.
Pari, RMC atopiwa aivigirwa kuna America, France, Australia, Italy nedzimwe nyika 20 uye nharaunda, uyewo, RMC anopa pfungwa dzedu dzakachinjwa kuti vatengi vedu China. boka redu agara nezvezvandaifanira tsvakurudzo, budiriro uye utsanzi, uye vakava itsva kaviri beadlock mavhiri zvizhinji kare vakaungana vatengi edu motokari Nissan Y60, Tundra, Jeep, Raptor, Jimny, Prado uye zvichingodaro, uye iwe unogona kuwana motokari iyi yedu Gallery. Uye zvinhu zvedu chakagadzirirwa by design zvikwata zvedu, akaramba tiri kuita zvakawanda zvakagadzirwa kusangana vatengi 'kunoda.
RMC achaita kutanga danho rechipiri yedu pakukura nzira. kambani yedu inoona "hunonzwisisa mitengo, vakarongeka kugadzirwa nguva uye yakanaka pashure-okutengesa basa" sezvo tenet yedu. Tinotarisira pamwe yakawanda vatengi kuti yakawiriranwa kukura uye zvakanakira. Tinogamuchira zvinogona vatengi kuti nesu.